Oomaar & Qaybdiid oo loo kala magacaabay wasiirada Tacliinta Sare & Macdanata ee federaalka. – Radio Daljir
Oomaar & Qaybdiid oo loo kala magacaabay wasiirada Tacliinta Sare & Macdanata ee federaalka.
Diseembar 15, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, Dec 15 – M/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta aqbalay magacaabista wasiirro dhawr ah oo uu dhawaan magacaabay R/wasaaraha Cumar C/rashiid Cali Sharma?arke.
Munaasabadda ballaaran oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayna ka soo qayb galeen mas?uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda oo ay ka mid ahaayeen m/weynaha iyo xubno badan oo ka tirsan golaha xukuumadda ayaa looga dhawaaqay wasiirrada cusub, waxaana degreetadaasi magacaabista xafladda ka akhriyey kuxigeenka R/wasaaraha C/raxmaan Xaaji Aadan Ibbi.
Wasiirrada maanta lagu dhawaaqay waxay kala ahaayeen Cabdi Xasan Cawale ?Qaybdiid? oo loo magacaabay Wasiirka Macdanta iyo biyaha iyo Maxamed C/llaahi Oomaar waxaa isna loo magacaabay wasiirka hiddaha iyo tacliinta sare, waxaana wasiirkaan laga baddalay macadinta biyaha oo uu horay u hayey.
Munaasabadda looga dhawaaqay wasiirradaan waxaa hadal kooban ka jeediyey m/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, waxaan uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la buuxiyo jagooyinkii ay ka geeriyoodeen wasiirradii dhawaan lagu dilay qaraxihii ka dhacay Hoteelka Shaamow ee magaalada Muqdisho, inkastoo jagooyinkaasi hal mid oo kaliya laga buuxiyey halka kuwii kalana ay bannaan yihiin.
M/weynuhu wuxuu carabka ku dhuftau dawladdu in ay sii wadi doonto dadaalkeedii ku aaddanaa hanashada awoodda dalka, iyo sidoo kale bad-baadinta shacabka Soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigaye.
Wasiirka loo magacaabay hidda iyo tacliinta sare Maxamed C/llaahi Oomaar, waxaa dawladda Shariif ka soo qaybtay xilal kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka macdanta iyo biyaha oo hadda uun laga baddalay.
Dhanka kale wasiirka cusub ee macdanta iyo biyaha Qaybdiid, waxaa dhawaan laga qaaday xilka taliyaha guud ee ciidanka bileyska Soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay ragga ugu awoodda badan dawladda hadda jirta ee Shariif Sheekh Axmed, wuxuuna ka soo mid ahaa raggii la soo shaqeeyey dawladdii C/llaahi Yuusuf.
Madaxda gobolka Mudug oo shir la yeeshay madaxda dadka soo barakacay, lagu gorfeeyey amniga gobolka.
Xulka gobolka Mudug oo u gudbay is-reebreebka 2-aad & kan gobolka Karkaar oo guul daro la hoyday.